Governemanta vaovao : hiova amin’ny ampahany ireo minisitra | NewsMada
Governemanta vaovao : hiova amin’ny ampahany ireo minisitra
Tsy antenaina hisy fiovana manao ahoana ary tsy izy rehetra akory no hoesorina ! Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, notarihin’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra, afakomaly, teny Iavoloha ny momba ny governemanta vaovao. Natsidiky ny filoha Rajaonarimampianina tamin’izany nanoloana ireo minisitra fa hiova amin’ny ampahany ihany ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta vaovao. Araka ny tsilian-tsofina, mety ho tafajanona amin’ny toerany izany ny antsasak’ireo minisitra 31 teo aloha. Mbola hijanona amin’ny toerany ny minisitra 15 ? Hipia-kelika sy hilamin-tsaina izany ny sasany amin’izy ireo. Hiova minisitera ny sasany raha ho voatana amin’ny sezany kosa ny hafa. Handao ny toerany ireo tsy nahomby tamin’ny governemanta teo aloha, tsy nahatontosa ny andraikitra nosahaniny sy tsy namaly ny nandrasana taminy.
Notsiahivin’ny filoha tamin’izy ireo koa ny tokony hampandehanana ny raharaham-panjakana, indrindra ny asa miantraika mivantana amin’ny vahoaka sy ny tsy tokony hisehoan’ny fanohintohinana izany na hanaovana hadisoana.
Hitsapa ny halalin’ny rano eto an-drenivohitra
Ankoatra izany, nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina koa ny tokony hanolorana eny anivon’ny Antenimiera ny lalàn’ny serasera sy ny fifandraisana. « Anisan’ny anton’izany ny efa firosoantsika amin’ny demokrasia ka tafiditra ao anatin’izany ny asa fanaovan-gazety, malalaka nefa koa mitaky andraikitra amin’ny vaovao omena manoloana ny mpihaino sy ny mpamaky ary ny mpijery », hoy izy.
Araka izany, ho fantatra anio amin’ny fitokanan’ny filoham-pirenena ny kianja etsy 67 ha ny momba ireo rehetra ireo sy ny fotoana mety hitsanganan’ny governemanta vaovao. Hitsapany ny halalin’ny rano eto an-drenivohitra rahateo io fisehoany vahoaka eto Antananarivo io…